ဒူဒူကြီး: စပ်မိစပ်ရာ သဘေ်ာ propeller (၁)
ဒူဒူကြီး ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ၊ ကြုံဖူးတာလေးတွေနဲ့ ကြားဖူးတာလေးတွေကို၊ ဖော်ပြဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ပါဝင်ရေးသားသူတွေကတော့ 'ဒူဒူကြီး'၊ 'ကိုထွန်း' နဲ့ 'ပေါတာလူး' တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ် အပြင်အဆင်ကိစ္စတွေကို 'မစံပါယ်' က၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ရေးသားဖော်ပြထားတာ အားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစိတ်တပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ အချက်အလက်တွေကိုဖြစ်စေ၊ ခွင့်ပြုချက်တောင်းစရာမလို၊ အသိပေးစရာမလိုပဲ၊ အလိုရှိသလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
စပ်မိစပ်ရာ သဘေ်ာ propeller (၁)
"မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်" မှ ညီငယ်တွေ၊ တူတော်မောင်တွေ propeller 'pilgrim nut' အကြောင်းရေးဖို့၊ တောင်းဆိုထားတာကြာပါပြီ။ အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့အတွက်၊ မရေးဖြစ်ခဲ့တာလည်း ကြာပါပြီ။ အခုတော့ အချိန် ရသလောက်၊ ရေးသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ propeller 'pilgrim nut' အကြောင်း၊ မစခင် propeller နဲ့ ပက်သက်တာလေးတွေကို၊ အရင်ဆုံးဖော်ပြပါ့မယ်။
Fig. Theory of ship propulsion
သဘေ်ာရဲ့ ရေယက်ပန်ကာရွက်လို့ခေါါတဲ့ propeller blades တွေဟာ၊ အမြဲကောင်းမွန်နေတဲ့ tip top condition အနေအထားမှာသာရှိသင့်ပါတယ်။ ပုံမှန်အနေအထားမှာမရှိပဲ၊ ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါါနေတဲ့ propellers တွေဟာ၊ သဘေ်ာရဲ့ propulsion efficiency ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ propellers တွေမှာ ဖြစ်ပေါါတတ်တဲ့ ချို့ယွင်းပျက်စီးမှု defects တွေကို၊ ခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ physical damage ဆိုတဲ့ တစုံတခုနဲ့ ထိခိုက်မိပြီးပုံသဏ္ဍန်ပျက်ကာ ချို့ယွင်းသွားခြင်း၊ fouling ဆိုတဲ့ အဏ္တွဝါအနုဇီဝ marine growth တွေ ကပ်ငြိခြင်းနဲ့ cavitation ဆိုတဲ့ အချိုင့်တွေဖြစ်ပေါါကာ၊ ပွန်းစားသွားခြင်းဆိုပြီး၊ တွေ့ရ ပါတယ်။
Fig. Damaged propeller
bouy လို့ခေါါတဲ့ ဗော်ယာတွေ၊ floating debris လို့ခေါါတဲ့ ရေပေါါမျှောပါနေတဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေနဲ့ floating ice လို့ခေါါတဲ့ ရေပေါါမျှောပါနေတဲ့ ရေခဲတုံးတွေကဲ့သို့၊ မာကျောတဲ့ အရာဝထ္ထုတွေနဲ့၊ ထိခိုက်မိရာမှ ပုံသဏ္ဍန်ပျက်ကာ ချို့ယွင်းသွားခြင်း physical damage ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ physical damage အနေနဲ့ propeller tip လို့ခေါါတဲ့ ပန်ကာရွက်အနားတွေ၊ ကွေးကောက်သွားခြင်းနဲ့ ပြတ်ထွက် သွားခြင်းတို့ကို၊ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ propeller ဟာ မူလပုံသဏ္ဍန် true shape မှ၊ distortion အဖြစ် ပုံသဏ္ဍန်ပျက်ကာ ချို့ယွင်းသွားတဲ့အခါ၊ propeller blades တွေတခုနဲ့တခု imbalance အဖြစ်၊ အချိုးအစား ညီညာမှု မရှိတော့ပဲ၊ တုန်ခါမှု vibrations တွေကိုပါ၊ ပေါါပေါက်စေပါတယ်။
Fig. Total operational efficiency
vibration ကြောင့် cavitation ပိုမိုဖြစ်ပေါါစေသလို၊ trust လို့ခေါါတဲ့ သဘေ်ာရွှေ့လျှားစေမယ့် ရေယက် အားကိုပါ၊ ကျဆင်းစေပါတယ်။ သဘေ်ာရွှေ့လျှားစေမယ့် ရေယက်အား ကျဆင်းမှုကြောင့်၊ သဘေ်ာမောင်းနှင်ရွှေ့လျှားတဲ့ total operational efficiency လည်း၊ ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ပုံသဏ္ဍန်ပျက်ကာ ချို့ယွင်းသွားတဲ့ propeller blades မှ၊ damage area ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ထပ်ပိုးကာ အသားဖြည့်ခြင်း၊ trim အနေနဲ့ စားကာကျန် blades တွေနဲ့ balance ဖြစ်စေရန် ချိန်ှညှိခြင်း အစရှိတာတွေကို၊ propeller repairing အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
Fig. hydro-dynamic propeller cavitation
"cavitation" ကို၊ inertial cavitation, non-inertial cavitation နဲ့ hydrodynamic cavitation ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပြီး၊ propellers တွေမှာဖြစ်ပေါါတဲ့ cavitation ကတော့၊ hydrodynamic cavitation ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် bearings တွေ wear down ဖြစ်ကာ၊ ပွန်းစား သွားခြင်း၊ drive shaft ကို damage အဖြစ် ပျက်စီးစေနိုင်ခြင်းနဲ့ သဘေ်ာမောင်းနှင်ရာမှာ၊ fuel လောင်စာပိုမိုအသုံးပြုရခြင်းတို့လည်း၊ ဖြစ်ပေါါလာနိုင် ပါတယ်။
Fig. Propeller class
propellers တွေကို၊ ISO Standard 484 အရ၊ Class S, Class I, Class II နဲ့ Class III ဆိုပြီး ခွဲခြားထားပါတယ်။ propeller ရဲ့ accuracy အရ ခွဲခြားထားတာဖြစ်ပြီး၊ manufacturing tolerance အရသတ်မှတ်ထားခြင်းလည်း၊ ဖြစ်ပါတယ်။ Class S propeller ဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့ very high accuracy propeller ဖြစ်ပြီး၊ Class I propeller ကတော့ high accuracy propeller ဖြစ်ပါတယ်။ Class II နဲ့ Class III propellers တွေကိုတော့ medium accuracy နဲ့ wide tolerance propellers တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။
Fig. Propeller fouling
propellers တွေမှာ marine growth တွေကပ်ငြိခြင်း fouling ဖြစ်ပေါါတတ်တဲ့အတွက်၊ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှု regular maintenance အဖြစ်၊ cleaning ဆိုတဲ့ propeller သန့်ရှင်းရေးကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ fouling လို့ခေါါတဲ့ calcium deposit တွေဟာ thickness (၁) မီလီမီတာ အထူလောက်၊ စတင်ဖြစ်ပေါါလာတာနဲ့၊ နောက်ထပ်အချိန် (၁၂) လလောက် အတွင်းမှာ၊ high accuracy Class I propeller ဟာ၊ wide tolerance Class III propeller အဆင့်သို့ပြောင်းလဲ ကျဆင်းသွားသလို၊ fuel consumption ဟာလည်း၊ (၆) % မှ (၁၂) % ခန့်အထိ ပိုမိုမြင့်တက်လာပါတယ်။ အချို့ propellers တွေဟာ၊ တည်ဆောက်ပုံ design နဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ material composition တို့ကြောင့်၊ thickness (၂၀) မီလီ မီတာ အထူခန့်အထိ၊ fouling ဖြစ်ပေါါပေမယ့် accuracy ကျဆင်းမှု မရှိတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
Fig. Underwater propeller cleaning
Fig. Underwater propeller polishing
propeller မှာ fouling အဖြစ်ကပ်ငြိနေတဲ့၊ marine growth တွေခွာချခြင်းကို cleaning နဲ့ polishing ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ propeller polishing ဟာ သန့်ရှင်းပြောင်လက်နေတဲ့ cleaned and polished surface မျက်နှာပြင်၊ ဖြစ်ပေါါလာစေဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ propeller cleaning နဲ့ polishing ကို၊ သဘေ်ာကျင်းမှာ လွန်းတင်ပြီး၊ ဆောင်ရွက် သလို၊ ရေထဲမှာတင် underwater polishing အဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။ harsh abrasive လို့ခေါါတဲ့ စူးရှတဲ့အရာဝထ္ထု တွေကိုသုံးပြီး၊ marine growth တွေခွာချတဲ့ အခါ၊ တောက်ပြောင်တဲ့ shiny blade ပန်ကာရွက်တွေ၊ ဖြစ်လာပေမယ့် polished surface မှာ၊ နက်ရှိုင်းတဲ့ deeply scratched အစင်းရာတွေ၊ ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
Fig. Propeller work in dry docking
နက်ရှိုင်းတဲ့အစင်းရာတွေများတဲ့အခါ propeller blades တွေရဲ့ surface မျက်နှာပြင်ဟာ၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ roughness surface အနေနဲ့၊ ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ အရင်ကထက် ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ micro နဲ့ macro fouling တွေ၊ ကပ်ငြိတွယ်ကပ်နိုင်ပါတယ်။ Class I propellers တွေမှာ၊ deeply scratched အစင်းရာတွေကို 1.6 micron (CLA) Ra* tolerance ထက် မနက်စေဖို့၊ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ သဘေ်ာ အမျိုးအစား type နဲ့ trading pattern သဘေ်ာမောင်းနှင်သွားလာရာဒေသပေါါမူတည်ပြီး၊ fouling ဖြစ်ပေါါမှုဟာ၊ အနည်းနဲ့အများ ကွာခြားလေ့ရှိပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် propeller ကိုတခါလောက် polished အနေနဲ့ ပြောင်ချောနေအောင် 'သ' ထားလျှင်၊ marine growth ကပ်ငြိခြင်းကို (၉) လခန့်၊ တားဆီးကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ propeller ခုတ်မောင်း လည်ပတ်မှု မရှိပဲ၊ longer layover period အနေနဲ့ အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ၊ ကျောက်ချ ရပ်နားထားတဲ့ သဘေ်ာတွေမှာ fouling ဖြစ်ပေါါမှုပိုများပြီး၊ trading constantly အနေနဲ့ အဆက်မပြတ် နီးပါး၊ မောင်းနှင် သွားလာနေတဲ့ သဘေ်ာတွေမှာတော့၊ fouling ဖြစ်ပေါါမှု နည်းပါးတာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။
Fig. Propeller edge modification
သဘေ်ာရဲ့ propulsion efficiency ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့ propellers တွေကို၊ modification အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ propeller modification အဖြစ် diameter reduction, pitch reduction နဲ့ trailing edge modification တို့ကို၊ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ပန်ကာရွက်မှ blade tips တွေကို၊ ညာစွာဖြတ်ထုတ်ကာ ပြန်လည် ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် diameter reduction ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ propeller ရဲ့ diameter အရွယ်အစား ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ၊ rpm ဟာ balancing ratio အတိုင်း၊ လိုက်ပါ မြင့်တက်လာ ပါတယ်။
diameter (၄၀၀၀) မီလီမီတာအောက် အရွယ်အစား propeller တွေမှာတော့၊ pitch reduction ကို ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ hub ပေါါမှာ တတ်ဆင်ထားတဲ့ blade တွေရဲ့ အစောင်းအနေအထား pitch angle ကို၊ လျှော့ချပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ trailing edge modification အဖြစ်၊ ပန်ကာရွက်မှ trailing edge ကို၊ bending အနေနဲ့ခေါက်ကာ၊ ကွေးခြင်း သို့မဟုတ် trailing edge ကို cutting အနေနဲ့ ဖြတ်ထုတ်ခြင်း၊ တို့ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ trailing edge modificationပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် rpm (၅) % ခန့်မြင့်တက် လာတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
Reference : House, David. J. Dry Docking and Shipboard Maintenance. Witherbys & Co Ltd, London., Hydrex Underwater Technology, 2005., Bindra, S.P. (1978). A Course in Docks and Harbour Engineering. Dhanpat Rai & Sons, Delhi.
Image credit to : http://ebookengineer.com/, http://www.maritimenz.govt.nz/, http://www.australpropeller.com.au/, http://www.cqdjournal.com/, http://www.answers.com/, http://www.bmtsmartservices.com/, http://www.kunitomi-div.com/, http://www.alphamarine.net/, http://www.nakashima.co.jp/
Remark : All images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.
Posted by ကိုထွန်း at 01:50
အိမ်အကူများအတွက် ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်
GTI ကျောင်းဆင်း အကို၊ အမများ
သဘေ်ာမောင်းတဲ့ အကို ကပ္ပတိန်ကိုလမင်းဦး
လေယာဉ်ပျံမောင်းတဲ့ အကို ကပ္ပတိန်ကိုဗရာ
MYANMAR GEOLOGY FRIENDS
Classification Societies & Their Role (၅)
Classification Societies & Their Role (၄)
Classification Societies & Their Role (၃)
Classification Societies & Their Role (၂)
Classification Societies & Their Role (၁)
"Port of Registry" ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း
စပ်မိစပ်ရာ သဘေ်ာ propeller (၄)
စပ်မိစပ်ရာ သဘေ်ာ propeller (၃)
စပ်မိစပ်ရာ သဘေ်ာ propeller (၂)
"Guidelines for Oil Terminal Operators on The IMO ...
"ရေကြောင်းသွားလာရေးနှင့် ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ စာအု...
သတ္တုဗေဒနှင့် Materials Science ဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်း...
Automation and Instrumentation ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ (38)
Automobile Engineering ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ (4)
Crane တွေအကြောင်းပြောကျမယ် (2)
သတ္တုဗေဒနှင့် Materials Science ဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းများ (2)
ရေကြောင်းသွားလာရေးနှင့် ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာစာအုပ်စာတမ်းများ (30)
ဒူဒူကြီး. Picture Window theme. Theme images by sbayram. Powered by Blogger.